ကိုပေါက်ရဲ့မှတ်စုလေးများ..: June 2010
အမှည့်လွန် အတွေး မျှင်မျှင် များ..
သူငယ်ချင်းတို့ဘ၀မှာ ငယ်ငယ်ထဲက ငါတော့ကြီးလာရင် အပျိုကြီးလုပ်မှာလို့စဉ်းစားထားတဲ့သူများရှိကြလား ကျွန်တော် ကတော့လေ ငယ်ငယ်ကနေ ခုထိ အပျိုကြီးလုပ်မယ်လို့ တစ်ခါတစ်လေတောင်မှ ယောင်လို့မတွေးမိခဲ့ပါဘူး… ဗေဒင်တွက်လို့ အပျိုကြီးဖြစ်မယ့် ဇာတာရှင်မဟုတ်ဘူးလို့ ဟောလိုက်တာနဲ့တင် ဗေဒင်ဆရာကို အမှန်မြင်တတ်သူလို့ယုံပြီးသားပဲ…. ။
ဟိုးငယ်ငယ် အပျံသင်ခါစ တက်ကြွတဲ့အရွယ် တစ်ဆယ်ကျော် ငါးနှစ်ပတ်လည် ဘ၀တုန်းကတော့ အသက်ကြီးလာလို့ လက်ထပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုလူကိုရွေးမလဲစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာ အရပ်ရှည်ရမယ်… ကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးရှိရမယ်… (ချောလွန်းနေလို့တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲနော် ကျန်ရစ်ဖြစ်မှာလည်းကြောက်သေး ) .. အရာရာကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်…
ရုပ်ရှင်တွေထဲကမင်းသားလောက်မိုက်တာလေးများရလေမလား .. အဲလိုစိတ်ကူးတွေနဲ့ရူးခဲ့ဖူးသေးတာ…. ။
အင်း ... အသက်နည်းနည်းကြီးလာ… နှစ်ဆယ်လောက်ရောက်လာတော့ စိတ်ကူးတွေလည်းနည်းနည်းပြောင်း လာတယ်လေ…၊ အရပ်မရှည်ရင်နေပါ တန်းတူဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော့်အရပ် ၅ပေ ၅ ထက်တော့နိမ့်တဲ့လူ မယူချင်ဘူး… စတိုင်မိတဲ့ငတိလေးလည်းဖြစ်အုန်းမှ….. အရာရာကိုဦးမဆောင်နိုင်ရင်နေပါ ကျွန်တော်လုပ်သမျှ အနှောင့်အယှက်မပေး အေးဆေးဖြစ်မယ့်သူကိုရွေးမယ်ပေါ့လေ ..အသက်အစိတ်မှာ ပုခက်မချိတ် နိုင်သေးရင် တစ်သက်မနိပ်တော့ဘူးဟေ့ လို့ ပြောနေကြတဲ့အရွယ် အခုရောက်လာပြန်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးတွေပြောင်းသွားပြန်ရောလေ အခုကျွန်တော်လိုချင်မိတဲ့သတို့သားက….တစ်သက်လုံးကြည့်သွားရမယ့်ရုပ် ကြည့်ကောင်းဖို့တော့လိုသေးတာပေါ့နော် ...။
အစားစားတဲ့အခါ ကြေး(ဂျီး) များတတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အစားကိုကြေးများတတ်တော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲအပြစ်ရှိတဲ့သူ မဖြစ်ချင်ဘူးလေ ..
အ၀တ်အစားဝတ်ရင် ရှပ်အင်္ကျီ မကြိုက်တဲ့သူ T ရှပ် များများဝတ်တတ်တဲ့သူကိုယူချင်တယ်
ရှပ်အကျီတွေ မီးပူတိုက်ရတာ ဘယ်လောက်တောင်ခက်သလဲဗျာ… Jeans ဘောင်းဘီကိုမချွတ်တမ်းဝတ်မယ်ဆိုလည်း ကြိုက်ပြီးသားပဲ အ၀တ်လျှော်စက်ထဲထည့်ပေးလိုက်မီးပူတိုက်တဲ့အခါ သိပ်တိုက်စရာတောင်မလိုဘူးပေါ့ ... ။
Skinny pants ၀တ်မှ စတိုင်ကျမယ်လို့ သူကထင်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေပဲ ဝန်ပါကွာ လို့ချော့ပြောရမယ်ထင်တယ်နော် ...ကျွန်တော်တို့နေမယ့်အိမ်မှာ အိမ်အကူဆိုတာ ကျွန်တော်ကမထားပါဘူး ..အိမ်မှုကိစ္စမှန်သမျှ ကျွန်တော်မလုပ်တတ်တာမရှိပါဘူး မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက်ဆိုတဲ့စကားကလည်း အလကား ထားတာမှမဟုတ်တာနော် ကျွန်တော်ဟင်းချက်နေတဲ့အခါ သူလည်းအားနေမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းလောက်တော့ဝိုင်းကူပေးပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ချက်ကျွေးတာမကြိုက်လို့ သူကိုယ်တိုင်ချက်မယ်ပြောလည်းကျွန်တော်က ၀မ်းမနည်းပါဘူး သူ့ဆန္ဒကသာအဓိကပါ ...။
သူအလုပ်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်က အိမ်မှာအလကား အအားနေမှာမဟုတ်ပါဘူး
သူပြန်လာတဲ့အခါ ပြောပြဖို့သတင်းစုံရဖို့အတွက် Online တက်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ chatရင်း သတင်းတွေလည်းဖတ်နေမှာပေါ့လေ သူပြန်လာတဲ့အခါ သော့ခလောက်ပဲကြိုနေတယ် ဆိုတဲ့အဖြစ် ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူး ..အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် သူပြန်ရောက်ပြီးမှ သူ့ကိုအစောင့်ထားပြီးသွားမှာပါ ...။
အားလပ်ရက်တွေမှာ သူက ကာရာအိုကေလည်းဟဲ ဘီယာလေးသောက် ပင်ပန်းတာတွေဖြေဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်shopping သွားဖို့ ငွေအလုံအလောက်သာပေးထား ဘေးစကားတွေကို မယုံဘဲ သူ့ကိုလွှတ်ပေးထားမှာပါ .. အင်း ဒါပေမယ့် ပွေလီလာမယ့် အခြေအနေဆိုရင်တော့ ထူးအိမ်သင်သီချင်းလေး အိမ်မှာခဏခဏဖွင့်ပြပေးရမယ်လေ ငါ့ထက်ချစ်တဲ့သူဆိုတာ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲရှိနေရင် လိုက်ပြီးလေ ရှာလို့သတ်ပစ်ချင်ပါတယ်…
ကျွန်တော့်ယူမယ့်သူက ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်း ခွင့်ပြုတဲ့သူကိုရောဂါဖြစ်စေတယ်လို့ မကြားသေးသရွေ့ ကျွန်တော်နဲ့ဝေးဝေးမှာ သောက်ခွင့်ပေးထားမှာပါ ကျွန်တော်ယူမယ့်သူမှာ ညီမဆိုတာမရှိမှဖြစ်မှာ ယောက်မရေသူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ကားကြည့်ပြီးသွားထဲကယောက်မ ဆိုတာ အသေကြောက်လို့မလိုချင်တော့တာပါ ဘ၀ဆိုတာတိုက်ပွဲခယ်မဆိုတာလိုက်ပွဲလို့ သတ်မှတ်တတ်တဲ့ခဲအိုမျိုးလဲ မရှိချင်ဘူး ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယူမယ့်သူကတစ်ဦးတည်းသောသားဆို ပိုမကောင်းဘူးလားနော်
တစ်ဦးတည်းသောသားတွေ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ကအေးအေးပါပဲ ..။
နှစ်ကိုယ်ကောင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်ကြိုးစားတတ်ရင်ဖြစ်ပါတယ် ... ယောက်ခမ ချစ်တဲ့ချွေးမလေးအဖြစ် ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးနေမှာပါ အိမ်ခွဲနေရင်းပေါ့လေ .. သူလည်း မိန်းမယူတာမှားပြီ ယောက်ခမအလွန်အနိုင်ကျင့်သည် ဆိုတဲ့အဖြစ် မဖြစ်စေရပါဘူး .. ကျွန်တော်တို့က တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် မိဘတွေအိမ် အလည်သွားရမှာနော် .. အမေတွေချက်တဲ့ထမင်းဆိုတာ ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့အရာမှတ်လား .. သူကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးနေချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်း .. ကျွန်တော်က အိမ်မှာ ပါတီလုပ်ပေး သူပျော်ဖို့အတွက်ဆို အမြဲအသင့်ရှိပြီးသားပါ .. တစ်ခါတစ်လေ ရန်ဖြစ် စိတ်ညစ်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော်ပဲအမြဲစခေါ်မှာပါ
ပြီးသွားရင်တော့ ရန်ဖြစ်တဲ့အကြွေးအတွက် လက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းလောက်တော့သူကပေးသင့်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ ...။
အင်း…… ကျွန်တော်လိုချင်တာတွေက သိပ်များများနေသလားဟင် ...ကျွန်တော်ကတော့ မများဘူးလို့ထင်တာပါပဲ ..အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး ဤ သုံးမျိုးချက်မပိုင်လျှင်နောင်ပြင်ရန်ခက်သည်လေး .. ဆိုတဲ့စကားလည်း ကြားဖူးသားပဲမှတ်လား တည်ဆောက်ပြီးတဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်လေးတော့ ဘယ်သူမှ ပျက်ချင်ကြတာမှမဟုတ်တာနော်… ကျွန်တော်လည်း လိုချင်တာတွေရမှရပါ့မလားတွေးရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေးရွေးရင်း ရွေးရင်း သူငယ်ချင်းတွေသာ အိမ်ထောင်ကျ ကျွန်တော်ကတော့ အပျိုကြီးများ ဖြစ်နေမလား မသိတော့ပါဘူးဗျာ .... ..။
အပေါ်က စာစုလေး ကတော့ ထာဝရသူငယ်ချင်း များ ထဲက ညီမငယ် မွန်မွန်ထူး ရဲ့ ဖော်ဝပ်မေးလ် လေးပါ .. အောက်က စာစု ကတော့ လူပျိုကြီးပေါက်ကျိုင်း ရဲ့ ပေါက်ကတရ လက်ကမြင်း စာ ဖြစ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား ...
ညီမငယ် မွန်မွန်ထူး ရဲ့ စာစု လေးကို ဖတ်ရင်း အမှည့်လွန်အတွေး လေး တမျှင်မျှင် နဲ့ ခင်ဗျ .. ပေါက်ကျိုင်းမလဲ အရွယ်တော် တစ်ဆိတ်ဟိုင်း လို့ အပျိုကြီး ( အဲလေ ယောင်လို့ )လူပျိုကြီး ဘဝနဲ့ တကိုယ်တည်း ဖြစ်နေပေမဲ့ ဒီ ဘဝ လေး ကို အလွန်ကျေနပ်မိ သဗျာ.. ခြေထောက်မှာ ဗွေပေါက် ခြေတောင့် အောင် လမ်းကြောရှည်လှ တဲ့ ပေါက်ကျိုင်း အတွယ်အတာ ဆိုလို့ အဖေ နဲ့ အမေ သာ ရှိခဲ့လေတော့ သွားပါများခရီးရောက် မအိပ်မနေ အသက်ရှည် ဆိုသလို ရှေးရာဇဝင် ထဲက ပေါက်ကျိုင်း ထုံး နှလုံးမူ လို့ ခင်ဗျ .. တောထဲတောင်ထဲ မှာ ဟိုခုန်ဒီကူး မျောက်လွဲကျော် ဘဝ နဲ့ အပျော်ကျူး နေတုန်း ပေါက်ကျိုင်း မွေးသမိခင် တုတ်တစ်ချောင်း နဲ့ ဆော်ပလော်တီး ဖို့ ရောက်လာမှ ကုပ်ချောင်းချောင်း နဲ့ ပြည်တော် ပြန်ရောက်ခဲ့ပေါ့ . .. ပြောလဲပြောစရာ အပျော်ကျူး နေတာက လဲ ဆယ့်နှစ်နှစ် ကျော်ကျော် ကိုး ...။
ကဲဗျာ .. ထားလိုက်တော့ ပေါက်ကျိုင်း ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝကို ဘယ်အနှောင်အဖွဲ့ မှ ကျူံးသွင်း မခံနိင်ပေါင်ဗျာ ... ။ အနှောင်အတွယ် ကင်းကင်းနဲ့ သွားချင်တဲ့ နေရာဆို ရွှတ်ကနဲ စားချင်တဲ့ ဟာဆိုရင် ပါးဖြဲနားဖြဲ စား အိပ်ချင်ပြီဆိုရင် တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဖုတ်ဖက်ခါ ထိုးအိပ်လို့ လူပျိုကြီး ဘဝ ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်း ရင်း သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း တွေက လေကြောရှည် မေးမြန်းစပ်စု လာကြပါတယ် ..။
ပေါက်ကျိုင်း မင့် မလဲ လူပျိုကြီး ဘဝ နဲ့ အရိုးဆွေး တော့မယ် .. အိမ်ထောင်မပြုတာ .. မစွံလို့လား.. ကြောက်လို့လား .. သောက်သုံးမကျလို့လား.. လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝကို ခုံမင်နေလို့လား.. ဒါမှ မဟုတ် မာမီ များတို့လို ခြောက် နေလို့လား.. တလားလား နဲ့ စပ်စု လိုက် ကြတာ ..။
သူငယ်ချင်း မောင်စပ်စု မယ်စပ်စု တို့ကို ပေါက်ကျိုင်း တစ်ကောင် ဒီလို မိန့်ခွန်း ပြန်ချွေ ရသဗျ.. အဟမ်း အဟမ်း ..။
ချေးခြောက်ရေနူး ပြန်ပြောရရင် ငယ်ငယ်တုန်းက အသဲ ဘဝင်ငြိ ဟတ်ထိ ဘူးခဲ့တဲ့ မဒီလေး တွေ လေးငါး ဦးတော့ ရှိဘူးခဲ့ သပေါ့ဗျာ .. ပေါက်ကျိုင်း သောက်ကျင့် အတိုင်း တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဟတ်ထိရင်း သူတို့တွေ မလဲ ပေါက်ကျိုင်း ကို စိတ်မရှည် ငတုံး လို့ သဘောထားပြီး တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် တစ်ပဲ့ပဲ့ကြွေ အိမ်ထောင်ပြု သွား ကြလဲ ဟောဒီ ပေါက်ကျိုင်း ပြောင်ကြီး မျက်နှာက စပ်ဖြဲဖြဲ ..
လူထဲကလူ သူလိုငါလိုပါဘဲ ... ။
အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး ဤ သုံးမျိုးချက်မပိုင်လျှင်နောင်ပြင်ရန်ခက်သည်လေး .. ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကိုကြောက် လို့လားဆိုတော့လဲ .. အဲဒီအချိန်တုန်းကလို ငမ်းကြော ထဖို့ နေနေသာသာ အခု ညီလေးတွေ ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ကစားနေတဲ့ ဖိုက်တာဂိမ်း ကို ပေါက်ကျိုင်း ဟိုး တောထဲတောင်ထဲမှာ ခြောက်နှစ်ကျော် ခွန်နှစ်နှစ် မက်မက်စက်စက် ကစား ခဲ့ဘူးလေတော့ အချိန်မရှိ အဲဒီ ဖက် ကို စိတ်ကူးလေးနဲ့တောင် မလှည့်မိခဲ့ပေါင်ဗျာ .. ၊ မာမီပေါက်ကျိုင်း လို့ ဆိုရအောင် ကလဲ တစ်ထင်ထင်မြည်နေတဲ့ စိတ်နဲ့ စမ်းချင်တာစမ်းမောင်ဗဂျမ်း လို ခါးတောင်းမြှောင်အောင်ကျိုက် လက်ခမောင်းခတ် ပြီး ချိုတစ်သွေးသွေး နဲ့ ... အဟေးဟေး..
ဖွဲတစ်ဆုပ်နိုင်တဲ့ အထိ ဆိုတဲ့ စကားပုံ လေးက ရှိသေး သကိုး...။
ပြီးတော့ကော .. ဟုတ်တယ် .. လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ် .. အပူအပင် မရှိချင်ဘူး .. သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ဘဝ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး တွေ ကို နေ့တဒူဝ တွေ့မြင်နေရတော့ လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝကို ပိုလို့ပိုလို့ မြတ်နိုး လာမိသဗျ ..၊ ပေါက်ကျိုင်း အခုအချိန်မှာ ဟိုး..အနောက်တိုင်း စကားပုံ တစ်ခုထဲကလို ဘဝ ကို စ ဖို့ လေးနှစ်ကျော် လိုသေးပေမဲ့ စဉ်းစားတတ်လာပြီ ..( အခု အချိန်တော့ ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ) ပေါက်ကျိုင်း အသက်အရွယ်လေး နဲနဲထောက်လာရင် လောက်ငှတဲ့ ဝင်ငွေ လေးနဲ့ ခပ်ရွယ်ရွယ်ခြံ ထဲမှာ ဝါသနာ ပါတဲ့ သီးပင်စားပင်လေး တွေ စိုက် ..အားရင် စာဂျပိုးပေါက်ကျိုင်း လက်လှမ်းမှီရာ စာတွေနဲ့ တရားစာလေးတွေဖတ် ... ဒါတွေ ကို ညဏ်စဉ် မမှီသေးဘူး ဆိုလဲ သမိန်ပေါသွပ် တို့ ၊ ဝိဇ္ဇာ တို့ ၊ မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ တို့ ကာတွန်းစာအုပ်လေးတွေ လှန်လှော နဲ့ .. အဟဲဟဲ ..
အဲဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး .. ပျော်ပျော်ပြုံးပြုံး နောက်ဆုံး အထိ ဖြတ်သန်း ချင် သဗျာ ..။
အင်း ... တွေးရင်းနဲ့ ဟို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ကို အမှတ်ရမိပါတယ် ..
တစ်ခါ တုန်းက ရိုးလွန်းအလွန်း ပြီး ပုတီးလေးတစ်ချောက်ချောက်နဲ့ တစ်ဦးတည်း သောသား ကိုအေးမောင် ဆိုတဲ့ လူပျိုကြီး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့ဗျာ .. ဒီလူပျိုကြီး က အသက် သုံးဆယ်ကျော် လေးဆယ် စွန်းခါနီးအထိ မစွံတော့ သူ့မိဘ တွေ က မျိုးဆက်ပြတ်မှာ ကြောက် သဟ ဆိုပြီး မိန်းမ ပေးစား ဖို့ စီစဉ်ကြ သဗျ .. အဲဒီလို စီစဉ် နားချ ကြတော့ လူပျိုကြီးက ကိလေသာတွေ ..သဏှာတွေ မီးတွေ ဆိုပြီး ခါးခါးသီးသီး ငြင်းသတဲ့ဗျာ .. မိဘတွေက မဖြစ်ချေဘူး ဆိုပြီး ဘေးဆွေမျိုး တွေကို အကူအညီ တောင်း ပြီး နားချခိုင်းရသတဲ့ .. ဒီတော့ လူပျိုကြီးရဲ့ အမဝမ်းကွဲ တွေက ဝိုင်းဝန်းပြီး ရွာတောင်ဖက်က မိနှင်း က ဒီလို ရွာနောက်က အေးဘုံ က ဘယ့်နှာ ရွာလည်က အပျိုကြီး မွန်မွန်ထူး က ဘယ့်နှယ် နဲ့ ဖြောင်းဖြ စေ့စပ်ကြတော့ အိမ်ကပြင် ကိုတွေတွေ ကြီး ငေးကြည့်ရင်း ဒီလို တစ်လုံးချင်း ပြန်ပြောလိုက် သတဲ့ဗျာတို့ ..
“ ဒါတွေ ဟာ မှောင်မိုက်လွန်းတဲ့ ကိလေသာ သဏှာမီး တွေပါ အမတို့ရယ် .. အမ တို့ မိန်းမအတင်း ပေးစား လို့ ကျွန်တော် ယူ ရမယ် ဆိုရင်လဲ .. အင်း ... တစ်လ လောက်တော့ လိုချင်သားဗျ ”
ဒီလိုနဲ့ဘဲ .. ညီမလေး မွန်မွန်ထူး က အပျိုကြီး ဘဝကို ပူပင်ကြောင့်ကျ .. ပေါက်ကျိုင်း တစ်ယောက် ကတော့ လူပျိုကြီး ဘဝကို ခုံမင်တောင့်တ .. ဘဝ ကိုဖြတ်သန်းရင်း နဲ့ဘဲ တရွေ့ရွေ့ ..... ။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 1:27 PM4comments:
ပြောချင်လွန်းလို့ ကြည့်နေတာကြာပြီ ...
အင်္ဂလန် ဘရာဇီး တွေနဲ့
တယ်ပြီးတော့ မယုံချင် ...။
“ မောင်းကျိုးပြီ ” “ ဘော်ဒီရှူံးတယ် ” နဲ့
ဘတ်ငွေ တွေ စာရင်းလိမ် လို့
အငယ်အိမ် ဘယ်မှာ ရှိမှန်း
ကျူပ် သိအောင် လိုက်စုံစမ်း မယ်ပါ့
ရပ်တန်း က ရပ် ဆင်ခြင်
သေချာရင် နောင်ဂျိမ်တီး ...။
အသာတကြည် မရ ရင်ဖြင့်
နှစ်ဝါ တစ်နီ အသင့်ပြင်ထားပေရော့
နှစ်ဆင့်ကန် ပြစ်ဒဏ်ဘော လိုပါ့
တောသူမ ဖလိုင်းကစ် နဲ့
တိုင်း သိအောင် ကြော်ငြာ ထည့်မယ်
ဟဲ့ .... သေနာကြီး ...။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:33 AM6comments:
မနေနိုင် မထိုင်နိုင် လက်ကမြင်း ကဗျာ ...
“ နေဝင် မင်္ဂလာ နောင်ဂျိမ် တေး ”
ဇိုးမောင်မောင် ပေါက်ကျိုင်း မှာ လ ...
ယမကာ ရွှေရည် ပုလင်းရယ်နှင့်....
သီချင်း ကိုတဲ့ အော်ကာငင် ...
သိုင်းကွက် ကို ဆင် ...။
အိမ်တွင်း ကို ဝင် ..
အိမ်ပေါ်က လေဒီညှင်း ရယ်မှ ....
ထမီ ကို စွန်တောင် မကာ ဖြင့် ....
ရပ်အော်လံ လူကုန် ကြားရအောင် ပ ....
လက်ညာမှာ တုတ်တို ဆွဲတယ် ..
ဆဲ ကလော် လို့ ဆင်း .... ။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 11:20 PM4comments:
စစ် ... စစ် .. ဆိုတာကြီး ကို ရပ်လိုက် ကြ ပါတော့လားဗျာ ...
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 1:16 AM No comments:
မြန်မာပြည် ကို လွမ်းတယ် ...
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 12:58 AM 1 comment:
အင်တာ ကီး ...
အသက်၆၀ ကျော် ခွန်နှစ်အိုရှစ်အို အဖိုးကြီး ပေါက်ကျိုင်း တစ်ယောက် ကွန်ပြူတာခန်းတစ်ခုတွင်
Microsoft Word ကို စသင်ရာ ... ဆရာ က ....
“စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်ပြီးရင် နောက်တပိုဒ်အတွက် Enter Key ကိုနှိပ်ပါ ..
E.N.T.E.R ဆိုတဲ့ Key ပါ…Keyboard မှာအကြီးဆုံး Key ပါ…တွေ့ပြီလားခင်ဗျာ...
မတွေ့သေးရင် ... Right Shift Key ရဲ့ အပေါ်မှာပါ .. Back Space ရဲ့ အောက်မှာပါ ...
Keyboard ရဲ့ ညာဘက်အစွန်ဆုံး ထောင့်မှာလည်းရှိပါတယ် ခင်ဗျာ...
တွေ့ပြီလား ခင်ဗျာ... ”
ဒါကို အဖိုးကြီးပေါက်ကျိုင်း က Enter Key ကို ကတုန်ကရီ နဲ့ လက်ညှိုး ထိုးပြပြီး ...
“သားလေး...... ဒါကိုနှိပ်ရမှာ လားဟင် ..”
သူ့အမေး ကို သင်တဲ့ ဆရာက ပြူးပြဲကြောင်တောင် ကြည့်ရင်း
“ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါကို နှိပ်ရမှာ ... အဲ့ဒါကို နှိပ် ... ရ ....မှာ ... ကဲ!!!ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း!!!”
“ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း” = (မည်သံစွဲအလင်္ကာ) ဇက်ပိုးကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်၍ထွက်လာသောအသံ
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:04 AM3comments:
အောင့်မေဖွယ် ရေဒီယို ဇတ်လမ်း လေး.. ... http://myanmarinsingapore.com/ မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
မဖြစ်စလောက် တင်ထားခဲ့သမျှ လေးတွေ...
ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးရှိသော စာမျက်နှာများ..
MM IT Development
စစ် ... စစ် .. ဆိုတာကြီး ကို ရပ်လိုက် ကြ ပါတော့လား...
ပေါက်ကျိုင်း သွားလေ့ ရှိတဲ့ နေရာများ..
~@ ကို ရင် စည် သူ @~